Ezikhathini zamuva, ungakwazi ukuhlangana nabantu abanombono wokuzilibazisa engavamile. Akunjalo kudala eRussia kwakunesidingo izwi engaqondakali "lekubazeni". Ngaphansi lo mqondo amanga ubuciko lekubazeni izithelo nemifino. Izingcweti kuhambile eminye - bengathola ibe wobuciko insipho, ushokoledi noshizi. Ngokuvamile, bonke okungukuthi amenable ukuba ahlabayo.
Uma sina wanquma ukufunda kulo msebenzi, nakanjani badinga simiselwe eqoshwe. Intengo lolu hlobo amathuluzi kubalulekile. Ngokuthenga imimese ezishibhile futhi ihlushwe kubo isikhathi eside, ziningi ekhungathekile futhi ukuyeka umsebenzi ezithakazelisayo.
Iqiniso liwukuthi insimbi ezishibhile ngokuvamile ezenziwe yekhwalithi ephansi steel. Imimese, kufakwe iqoqo ekuqopheni amatshe tupyatsya ngokushesha kakhulu futhi zidinga imimese njalo. Ukudla lezi mishini ekhethekile kuyaqabukela ifomu elifanele, kuba okuningi kungenzeka sibalo. Ngakho-ke, cishe kungenzeki ukuba ugaye. ithuluzi Blunt akukucabangeli bushelelezi ukusikeka ngqo kule nqubo. Ngenxa yalokho, umkhiqizo zonakale, kanye nemizwelo kakhulu.
Ngaphandle steel izinga ngenxa yokuqhuba eqoshwe Kubalulekile ukuthi engele blade we egoba ziye bahlolwe ngokucophelela. Futhi ungakhohlwa mayelana Ukusebenziseka. Ngakho uma unquma sina bahlanganyele eqoshwe, ngiyacabanga, kusuke kuyisikhathi sokuthandaza basebenzise ngayo imali ukuthenga ithuluzi eliphezulu. In an icala ngokwedlulele, uma ungenawo ezizayo, ngeke kwenzeke ukuba uthengise simiselwe lekubazeni kuya ku-intanethi. Lapho kangangokuba namuhla nje ithandwa kakhulu. Ngokusho kochwepheshe, kakhulu amathuluzi eliphezulu zenziwa eJalimane.
Isethi indinganiso lekubazeni ngokwesiko kuhlanganisa lezi zinhlobo ezilandelayo imimese:
- Thai has blade iDemo ewumngcingo evumela ukuba usike amaphethini ngisho nzima ku izithelo ezithambile;
- ucezu emfushane kusiza ukubamba ahlabayo bokubeka izithelo emikhulu nemifino;
- isiyingi nuazetki noma kobujamo obusaqanda kukhona ngesimo nezinkezo, ukuzisebenzisa usike amabhola ezahlukene futhi ama-, futhi ukususa uginindela kusukela izithelo;
- karbovochnye imimese uvumele ukwenza ezihlukahlukene amaqabunga umhlobiso phezu izithelo.
Ngaphezu kwalokho, ikhithi ingase ihlanganise eqoshwe kanye namanye amathuluzi bungavami. Ochwepheshe ngokuvamile zisebenzisa ezihlukahlukene yemifino peelers, kanye namathuluzi eqoshwe.
Awokuqopha - ifomu eliyingqayizivele lobuciko. Ngitjho nanyana angakhuthaza bona ngeke yehle ukuphila kwakho, amakhabethe ngeke ngithuka ezihlukahlukene yezandla. Phela, amalungu omndeni, futhi izivakashi ekhaya lakho ubumnandi uyodla konke yobuciko. Ungakhohlwa ukuthatha izithombe zazo.
Ngokuthenga iqoqo eqoshwe, kumelwe uqonde ukuthi kuzothatha isikhathi ngaphambi kokuthi sifinyelele nampumelelo lo msebenzi. Ngakho-ke, i-okufanele zithathwe amakhosi kuphela bekhuthele futhi nesineke. Ngenhlanhla, namuhla emizini enkulu kukhona izikole ezihlukahlukene ezifundisa leli fomu entsha art kithi.
By endleleni, uma uthanda, kokuba kahle ngobakhamuzi ekuqopheni amatshe ungazama ngamasevisi elinemifanekiso ukusika emzini. Iphuzu liwukuthi akusiwona evame kakhulu, kodwa kungenye into ehluke kakhulu kunenzuzo.
Ngenza kanjani ukwazi Sberbank inombolo ye-akhawunti ikhadi: kusondela main
Teymurova unamathisele nokusindiswa ajulukayo